Blog – The Real Estate Institute of Zimbabwe
On February 12, 1945, in Bulawayo, Zimbabwe, professionals from the real estate industry met for the first time as the then called Southern Rhodesia Institute of Estate Agents and Valuers. Later on a Constitution, Rules and Byelaws were adopted, under which the Institute has pursed its objectives up to this
May 19, 2020 May 20, 2020 admin	1 Comment
The Real Estate Institute of Zimbabwe (REIZ) is a member driven organization established in 1945 with the aim to unite in one body all persons practicing various disciplines of the profession of real estate. We also seek to secure the advancement and facilitate the acquisition of that knowledge which from
Embracing Research in Real Estate On the 5th of July 2019, the Real Estate Institute of Zimbabwe held one of the most important event on its calendar (Winter School). This year’s event was held under the theme “Embracing the Future through Transparency Models in Real Estate Practice”The theme directly speaks
March 25, 2020 May 20, 2020 admin	0 Comments
Fidelity Mhlanga With the Zimbabwean economy reeling from macro-economic challenges such as the current liquidity crunch and hostile investment policies, companies are shutting down with thousands of workers losing their jobs at an alarming rate. Zimbabwe Independent business reporter Fidelity Mhlanga (FM) this week spoke to Real Estate Institute of
OCCUPANCY levels in Harare’s Central Business District (CBD) are averaging between 50% and 90% for commercial and office space, as demand continues to decline due to the dire economic situation, NewsDay has established.BY TATIRA ZWINOIRA Real Estate Institute of Zimbabwe research officer Francis Chinjekure told NewsDay that the CBD commercial